Nhau - Sei Uchisarudza Sunmaster Kunze Fenicha?
Sun Master yakawanikwa muna 1996. Vabatsiri vanosanganisira akawanda anozivikanwa F & B nemahotera ehotera, seGuangzhou Shanglian Thai Restaurant neLibya "A-one" Playcafe & Restaurant. Mushure memakore makumi maviri nemashanu ekukura, takave neruzivo rwakadzama, hunyanzvi hwehunyanzvi, hurongwa hwakakura. Mukuwedzera, isuwo ndiye mumwe wevatungamiriri vashoma vekunze fenicha indasitiri ine makore anopfuura makumi maviri neshanu.
Isu tinowana BSCI uye iyo ISO 9 0 0 1: 2015 nekuedza kweSun Master timu yehunyanzvi inopfuura mazana matatu. -quality uye basa rechokwadi nehunyanzvi hwedu hwehunyanzvi uye yesainzi manejimendi system.
Isu hatisi chete fekitori yeOEM ine ruzivo rwemakore anopfuura makumi maviri, asi inyowani dhizaini yekugadzira inoramba ichitangisa anopfuura mamodheru makumi matatu mwaka wega wega. Zvekupa hwakanakisa mhando, isu takatumira kunze kwemuchina wekudhonza, anodizing ekugadzirisa michina uye ekuona maturusi kubva munyika dzakasimukira, uye vashandi mazana maviri ane makore anopfuura gumi ehunyanzvi ruzivo.